काठमाडौंको सतह मुनि सम्पदा - Himalkhabar.com
रिपोर्टमंगलबार, जेठ ११, २०७३
काठमाडौंको सतह मुनि सम्पदा
महाभूकम्पपछिको अन्वेषणले काठमाडौं उपत्यकाका ऐतिहासिक सम्पदाहरू मुनि प्रशस्त पुरातात्विक अवशेष रहेको देखाएको छ।
हनुमानढोका दरबार परिसरस्थित काष्ठमण्डप मन्दिरको जग उत्खनन गरिंदै । सबै तस्वीर: गोपेन राई
विश्व सम्पदा सूचीका हनुमानढोका, पाटन र भक्तपुर दरबार क्षेत्रका भवन, मठमन्दिर, डबली आदि ऐतिहासिक संरचनाहरूको मात्र चर्चा हुँदै आएको छ, आजसम्म। वास्तुकला, निर्माण प्रविधि, प्रयुक्त सामग्री र सांस्कृतिक/धार्मिक/ऐतिहासिक कारणले यी संरचनाहरू विश्व प्रसिद्ध छन्। हालैको एक अन्वेषणले यी सम्पदा रहेका जमीनभित्र पनि प्रशस्त पुरातात्विक अवशेष रहेको देखाएको छ। ती अवशेषहरू सतहको उज्यालोमा आउँदा इतिहासको कुन–कुन पाटोमा प्रकाश पार्छन्, उत्खनन नहुँदासम्म पर्खनै पर्नेछ।
१८ असोजदेखि ६ मंसीर २०७२ सम्मको अनुसन्धानमा ‘ग्राउन्ड पेनिट्रेटिङ राडार’ (जीपीआर) प्रयोग र उत्खनन विधि अपनाइएको थियो। जीपीआर प्रविधिले जमीन नखनी त्यसभित्रका वस्तुहरूको जानकारी दिन्छ। अन्वेषणमा सहभागी पुरातत्व विभागका पुरातत्व शाखा प्रमुख रामबहादुर कुँवर ती अवशेषहरूको पहिचानका लागि थप अनुसन्धान गरिहाल्नुपर्ने बताउँछन्।
सम्पदाविज्ञ प्राध्यापक सुदर्शनराज तिवारीका अनुसार, मल्लकालयता संरचनाका जगमा ढुंगा राख्न थालिएको थियो। काष्ठमण्डपको जगमा भने ढुंगाको प्रयोग देखिएन। “यसबाट काष्ठमण्डप मल्लकालअघि नै निर्माण भएको प्रमाणित हुन्छ”, तिवारी भन्छन्, “लिच्छविकालमा जगमुनि ढुंगा राखिंदैनथ्यो।”
अहिलेको अध्ययन काष्ठमण्डप बनेको समय यकिन गर्न पनि सहायक हुने विश्वास गरिएको छ। (हे. बक्स– मध्यकालीन काष्ठमण्डप) यस पटकको अध्ययनमा काष्ठमण्डपको जग र थामहरू गाडेको स्थान भेटिएको छ। हरेक थामका लागि छुट्टै जग रहेछ। मूल जगभित्रको माटो फालेर नवकुण्ड (१६ खुट्टे) बनाइएको छ।
काष्ठमण्डपको जगमा भेटिएका सुनको जलपको सिक्का।
त्यो ठाउँमा काष्ठमण्डप निर्माण वा मर्मत गर्दाका रेखाचित्र, नापनक्शा वा यस्तै अरू कागजात पनि राखिएको हुनसक्ने प्रा. तिवारीको अनुमान छ। त्यहाँ केही छ भन्ने कुरा सामाजिक स्मृतिमा रहँदै आएकोमा अहिले प्रविधिले पनि देखाएको बताउँदै उनी भन्छन्, “पुनःनिर्माण गर्दा यसको उत्खनन पनि गरौं, ड्रइङहरू नै भेटियो भने त काष्ठमण्डपबारे थुप्रै नयाँ कुरा थाहा हुन्छ।”
उता, पाटनमा चार–नारायण मन्दिरदेखि दरबार अगाडिको सडकसम्म र भक्तपुरमा पश्चिम ढोकाबाट दरबार क्षेत्र छिरेपछि आउने फराकिलो खुला क्षेत्रमा जीपीआर सर्भे गरिएको थियो। हनुमानढोकामा २००९ वर्गमिटर, पाटनमा १२४९ वर्गमिटर र भक्तपुरमा १८३० वर्गमिटरमा यस्तो सर्भे गरिएको थियो।
उपत्यकाको पुरातात्विक/ऐतिहासिक सम्पदा ‘डकुमेन्टेसन’ गर्दै आएका आलोक तुलाधर अनुसन्धान प्रतिवेदनले पुरातात्विक अवशेष रहेको देखाइसकेपछि तत्काल अन्वेषण थाल्नुपर्नेमा त्यसो हुन नसकेको बताउँछन्। सबै जमीनमाथिको पुनःनिर्माण भन्दै दौडिरहेको बताउँदै उनी भन्छन्, “सतह मुनि परेको इतिहासमा त कसैको ध्यानै छैन।”
ऐतिहासिक सम्पदाहरूको अध्ययनपछि प्रकाशित ‘काठमाडौं उपत्यकाको विश्व सम्पदा क्षेत्रमा भूकम्पपछिको शहरी पुरातात्विक अन्वेषण, क्षतिको मूल्यांकन र विवेचना’ शीर्षकको प्रतिवेदनले थप अनुसन्धानले सम्पदाको पुनःनिर्माणमा सहयोग पुर्‍याउने औंल्याएको छ।
प्रतिवेदनमा सिफारिश छ– ‘काष्ठमण्डपमा गरिएको अन्वेषणले स्पष्ट चित्र प्रस्तुत गरेको भए पनि त्यो सानो क्षेत्रमा मात्र गरिएकाले त्यहाँको संरचनाबारे पूर्ण जानकारी लिन सकिएन। त्यहाँका अन्य सम्पदाको पनि उत्खनन/अनुसन्धान गरिनुपर्छ। त्यहाँ गरिने उत्खननले त्यसको इन्जिनियरिङ, निर्माणको चरण र पुनःनिर्माणको तरीकाबारे जानकारी दिनेछ।’
फुटेको खानेपानीको पाइप मर्मत नगर्दा काष्ठमण्डपको जगमा जमेको पानी।
पुरातात्विक/ऐतिहासिक सम्पदा क्षेत्रमा पूर्वाधार विकासदेखि निर्माणसम्मका काम गर्दा कति सजग हुनुपर्छ भन्ने यसले देखाउँछ। तर, अहिले पनि तीनवटै दरबार क्षेत्रभित्र अन्धाधुन्द रूपमा पोल गाड्ने, ढल लैजाने, ढुंगा छाप्ने, पाइप र तार बिछ्याउने, ठूला सवारी साधन गुडाउने लगायतका कामहरू भइरहेको छ। अन्वेषणका क्रममा भक्तपुर दरबार स्क्वायरभित्र जमिनमुनी पाइप र विद्युतीय तारहरू जस्ता गैर पुरातात्विक वस्तुहरू प्रशस्तै पाइएका थिए। यस्ता कार्यले जमीनको सतह मुनि रहेका ती पुरातात्विक अवशेषलाई नष्ट बनाउँछन्।
भूकम्पले दरबार, मठ, मन्दिर भत्काएपछि भग्नावशेष हटाउन डोजर प्रयोग गरियो। त्यस्ता गह्रौं उपकरणले सतह मुनिका पुरातात्विक सम्पदामा असर पुर्‍याउने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। प्रतिवेदन भन्छ– ‘हनुमानढोका, पाटन र भक्तपुर दरबार क्षेत्रमा जीपीआर सर्भेका आधारमा बनाइएको पुरातात्विक जोखिम नक्शाका आधारमा मात्र काम गर्नुपर्छ। भूकम्पले ध्वस्त बनाएका संरचनाको पुनःनिर्माण पनि त्यही आधारमा गर्नुपर्छ।’
काष्ठमण्डप मन्दिरको जग।
महाभूकम्पले पुराना मन्दिरहरू भत्काएपछि ‘आर्कियोलोजिष्ट’ हरूको चिन्तापूर्ण आशंका थियो– जगको खराबीले संरचना भत्किएको हुनुपर्छ। तर, हनुमानढोकाको काष्ठमण्डप र पाटनको ‘चार नारायण’ मन्दिरको जगमा कुनै समस्या नभएको अन्वेषणका क्रममा थाहा भयो। भूकम्पपछि पनि दुवैको जग दुरुस्तै पाउँदा अन्वेषण टोली खुशी भयो। “हाम्रो परम्परागत निर्माण प्रविधि र सामग्री अत्यन्त भरोसायोग्य रहेछन्”, टोलीमा सदस्य रहेका कोषप्रसाद आचार्य भन्छन्, “कुनै पनि भूकम्पले जगमा क्षति पुर्‍याएको रहेनछ, यो ज्यादै खुशीको कुरा हो।”
चार नारायण मन्दिरको जग।
राहुल सांकृत्यायनले सन् १९३६ मा तिब्बतको शाक्य गुम्बामा पाएको पातको पाण्डुलिपि ‘नामसंगिति’ मा ‘श्री काष्ठमाण्डपे’ उल्लेख छ। त्यो पाण्डुलिपि काठमाडौंको ब्रह्म टोलमा शुक्रबार, २४ सेप्टेम्बर ११४३ मा तयार पारिएको थियो।
(www.rebuildkasthamandap.com) त्यो मितिमा टोलको नाम नै प्रसिद्ध भइसकेकाले काष्ठमण्डपको निर्माण त्योभन्दा धेरै पहिले भएको प्रा. तिवारीको अनुमान छ।